विभिन्न जातिहरूका र संसारको धर्म को mythologies मा, त्यहाँ हाम्रो संसार देखा कसरी रूपमा व्याख्या सबै किसिमका छन्। प्रकृति को एक शक्ति र एक उच्च बुद्धि छ ब्रह्माण्डको को उद्भव को हरेक संस्करणमा तर कुनै कुरा यी सिद्धान्त कसरी फरक थिए, त्यहाँ तिनीहरूलाई एकतामा बाँध्ने कुरा हो। पनि अक्सर उपस्थित दिग्गज र अविश्वसनीय मान्छे, अबोध्य शक्ति। यो प्राकृतिक घटना को मूल, तिनीहरूले आँधीबेहरी आगो डराएका थिए किन पुरातन मान्छे ठ्याक्कै थाहा छैन सक्छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ, र विभिन्न तत्व को आफ्नो व्याख्या यो ईश्वरीय थियो।
लगभग हरेक पौराणिक कथाहरु मा, आफ्नो नाम थोर थियो नर्स मा गर्जन शासक थियो। हथौडा भगवान थोर - यो पौराणिक कथा को "अवशेषहरूको" को एक। यो परमेश्वर को हुनुहुन्छ?
नर्स पौराणिक कथा
एक आधुनिक पौराणिक कथाहरु मा ज्ञात सबैभन्दा पुरानो को - तथाकथित, पाँचौ शताब्दी ई.पू. देखि गठन भएको थियो जो मसीहीधर्म युग अघि जर्मन-स्कैंडिनेवियाई। कहिल्यै अनुसार संसारको उपस्थिति वर्णन गरिएको छ जो यस विज्ञान "एल्डर Edda" (कविता) र "Edda" (गद्य) जानिन्छ, रुचि थियो हरेकले को Germanic कुल (यी काम को पदहरू सातौं शताब्दी सी लेखिएको थियो । Sturluson)।
यो आधार राख्नु पौराणिक कथाहरु को गहिराई ( "ginnungagap") जो मा आगो र पानी प्रभुत्व किनाराको। स्वर्गमा छ जो देवताहरूको देश, - जो Asgard विपरीत मा पृथ्वी Midgard सिर्जना जन्म दिग्गज, परमेश्वर Odin को उपस्थिति, वर्णन गर्दछ।
सबैलाई कम्तिमा srednevekokoy कविता मा, नर्स पौराणिक कथा को एक विचार छ "को Nibelungs को गीत।" यो आधारित, त्यो ठूलो ओपेरा रिचर्ड वाग्नर लेखे र चलचित्र को धेरै खिच्नुभयो थियो। बच्चाहरु को लागि, यो लोकप्रियता धेरै hobbits (बारी मा, लेखकले जन। आर आर Tolkien संग आए जो,) संग तुलना गर्न सकिन्छ कि एक परी कथा कल्पना जस्तै कुरा हो।
मानिसहरूको संसार र ठाडो घटक - - जीवन को रूख, खरानी Yggdrasil भर्खरै सिर्जना संसारको संरचना तेर्सो घटक थियो।
देवताहरूको र नायक, साहसिक र लडाई ... यस्तो विशाल नयाँ संसारमा सुरक्षा माग। थोर - गर्जनका परमेश्वरको (ग्रीक पौराणिक कथाहरु मा Zeus को गर्जन संग तुलना), यो आफ्नो प्रसिद्ध हथौडा संग Midgard र झगडे सुरक्षित राख्दछ।
कसरी थोर को हथौडा भनिन्छ? Mjölnir। यस विशेष हतियार। कारण बदमासी Loki (देवता धूर्त र बदमासी), उहाँले गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र सारे, र ह्याण्डल बढ्तै छोटो थियो। यो यी मिसाइल हतियार मात्र भगवान थोर र आफ्नो छोरा मिसिन लड्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई बताउँछन्। यो पनि गर्जन को प्रभु विशेष फलाम पन्जा मा राखे, र त्यसपछि आफ्नो हात मा एक हथौडा धेरै सही भए, तपाईं thrower को हात मा आन्नद हरेक समय के वर्णन गर्दछ।
हथौडा भगवान थोर - mjölnir - त्यसैले यसको प्रभाव त्यस शक्तिशाली छ र त्यहाँ गर्जन छ। हामी दुवै अब त्यहाँ गर्जन छ किन थाहा छ, विज्ञान लामो सबै व्याख्या छ प्राकृतिक घटना। तर पुरातन जर्मन थाहा थिएन, र यसैले घटनाहरूको ईश्वरीय विवरण ठूलो महत्त्व संलग्न।
भाषा र संस्कृति मा थोर गरेको हथौडा
नर्स पौराणिक कथा धेरै देशहरूको भाषा र संस्कृति मा एक विशाल प्रभाव थियो। (। - थोर दिन, यो Donnerstag -। दिन गर्जन को, टोरा अर्थात् अंग्रेजी बिहीबार) उदाहरणका लागि, अंग्रेजी र "बिहिबार" हप्ताको जर्मन दिनमा "को टोरा को दिन" को रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।
स्कैनडिनेविया मा थोर को हथौडा धेरै लोकप्रिय छ। आफ्नो necks वरिपरि आफ्नो तस्वीर संग Amulet। यसलाई (, बरु वा आफ्नो जीवन) उहाँले मालिक सुरक्षित हुनेछ विश्वास छ। खाट अन्तर्गत बन्दुक को Statuette को नवविवाहितहरूका, यो तिनीहरूलाई Zdorovenki बच्चाहरु को धेरै ल्याउनेछ भनेर विश्वास थियो कायम। जाहिर छ, शताब्दीयौंदेखि लागि परम्परा अझै पनि जीवित थियो किनभने आशा, जायज थिए।
प्राचीन परम्परा फिर्ता आउन झुकाव छ कि यो ज्ञात छ, र त्यो एक पटक हाम्रा पुर्खाहरूले आधुनिक किशोरीहरूको अब सताउन सक्छ पाऱ्यो।
कसले थोर गरेको हथौडा अवधि भन्दा जवान मानिसहरू बीच कम महत्त्वपूर्ण छैन छ। अक्सर मानिसहरू (यो महिला को उपयुक्त मुख्य रूप जवान मानिसहरू, रक्षक छ) एक रोचक तस्वीर एक टाटु बनाउन।
हतियार आफ्नो मालिकबाट छुट्टै जीवन बस्थे। त्यसपछि उडान टाढा, पीठ, हथौडा जीवित भने थियो। गर्जन परमेश्वरको दासत्वबाट एक हतियार बाहिर जमानत गर्न, आफै फिर्ता भएको थियो।
भिडियो खेल को जमीन जायदाद मा पनि अक्सर नायक को एक विशेष हतियार रूपमा mjölnir (हथौडा भगवान थोर) फेला परेन। स्कैनडिनेविया आफ्नो छवि पनि आफ्नो प्रतीकहरू पाइन्छ, धेरै धातु बैंड प्रेरित यो वस्तु आउँछ।
को स्केचहरू मा टाटु पार्लर एक रंग वा बन्दूक को कालो-र-सेतो चित्र द्वारा अक्सर प्रतिनिधित्व छन्। यो अवश्य देखिन्छ, शैली, यो symmetrical छ, एक रुनिक ढाँचाको छ। तथापि, आरक्षण भएपछि, छाला मा ढाँचा धेरै आत्मा बिना, पाठ्यक्रम, असम्भव लागू हुन्छ। सबै प्राचीन प्रतीक हो, शताब्दीयौंको द्वारा समर्थित शक्ति, छ, र परिणाम बिना लागू गर्न सकिन्छ।
यो तपाईं आफ्नो शरीर मा थोर को हथौडा राख्न चाहनुहुन्छ के आफैलाई लागि सही स्पस्ट बोल्नु् गर्न आवश्यक छ। किनभने यो विभिन्न जनले, समस्याहरूको विरुद्ध सुरक्षा: यस बारे यो अर्थ गर्जन र बिजुली को भगवान नर्स पौराणिक कथा मा - एक हार्डी, अग्लो, बलियो, आक्रमण Midgard रक्षा गर्न डिजाइन। केही ट्वीक्स साझेदारी यो mythical हतियार natures को छवि, उज्ज्वल, शक्ति-भोक अनुरूप, उत्प्रेरित। को गुण यस्तो विकास गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूलाई, टैटू विशेषज्ञहरु पनि ठ्याक्कै यो ढाँचा लागू गर्न सल्लाह।
कुनै पनि मामला मा, तपाईं यो हतियार एउटा amulet लगाउने भने, तपाईंले एक टाटु भने, तपाईं एउटा कुरा याद गर्न आवश्यक: हथौडा भगवान थोर पुरातन महाकाव्य एक शक्तिशाली ऊर्जा वहन, को पौराणिक कथा जो हल्कासित लिन सकिन्छ गर्न।
सिरिया धर्म: विगत र वर्तमान
पुरुष खतना। किन गर्छन्?
को अर्थोडक्स चर्च मा iconostasis के हो?
यो भने के मतलब प्रतिमा स्ट्रिम myrrh गर्छ?
विहारको - विहार ... Stavropegic - यो कस्तो अर्थ राख्छ?
शिन्टो के हो? जापान को परम्परागत धर्म
मानव संसाधन व्यवस्थापन: सामान्य र विशिष्ट प्रश्नहरू
रूसी मा संज्ञाहरूको बहुवचन
शीर्ष हलिउड स्टार जोडी (फोटो)
Militant "ग्यालक्सी को संरक्षक।" हास्य ब्लकबस्टरको कास्ट
टोगो, लियोको राजधानी: मुख्य आकर्षण
लुम्बिनी रीढ़को चन्ड्रोसिस: लक्षणहरू, उपचार, कारणहरू र निदान
अनिवार्य चिकित्सा बीमा नीति - नि: शुल्क चिकित्सा हेरविचार गर्ने अधिकार